शरीरमा निलो दाग देखाप र्दा बो’क्सिले चु’सेको भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ ? यस्तो छ हो’स उडाउने वास्तविक कारण – Online Khabar 24
शरीरमा निलो दाग देखाप र्दा बो’क्सिले चु’सेको भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ ? यस्तो छ हो’स उडाउने वास्तविक कारण
सबैभन्दा पहिले माथि follow मा थिच्दिनुहोला ,
कहिलेकाहिँ विहान उठ्दा तपाईंको शरीरमा निलो दाग–ध’ब्बा देखिन्छ ? यस्तो दागदब्बालाई हाम्रो नेपाली समाजमा बो’क्सीले चुसे’को (टोकेको) भन्ने गरिन्छ ।
खास गरेर महिलाको खुट्टा र पाखुरामा यस्तो दाग देखियो भने बो’क्सीले चु’सेको भन्ने गरिन्छ । तर, यसमा कुनै सत्यता हुँदैन ।
यदि तपाईंको शरीरमा पनि निलो दाग र धब्बा देखिन्छ भने सावधान भइहाल्नुहोस् । किनकि श’रीरमा आउने कुनै पनि परिवर्तनले तपाईंको नराम्रो ‘ अवस्थालाई संकेत गरिरहेको हुन्छ ।चिकित्सकहरुका अनुसार शरीरमा देखिने निलो दाग हाम्रो स्वा’स्थ्य अवस्था बि’ग्रन लानेको अवस्था हो | हेर्नुहोस् शरीरमा देखिने निलो दागका कारणहरु यस्ता छन ,
आम रुपमा छालामा चो’ट लाग्दा यस्तो दागहरु देखिन्छ । कहिलेकाँही तपाईंको आफ्नै शरीरको भागले पनि अर्को भाग थि’च्चिने अवस्था हुन्छ । यस्तै कुनै बस्तुसँग ठ’क्कर खाँदा पनि यस्तो चो’ट लाग्न सक्छ ।यसरी चो’ट लाग्दा श’रीरका रक्त धमनिमा असर पुग्न जान्छ, जसका कारण शरीरमा नि’लो दाग देखिन्छ ।
रग’त जम्न र रगतका धमिनिमा लाग्ने चोटहरु भर्नका लागि हाम्रो शरीरलाई केही भिटामिन र मिनरलको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसकारण तपाईंले खानामा यस्तो भिटामिन र मिनरल प्राप्त हुने चिजहरु समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जस्तै भिटामिन ‘के’ले रगत जम्न मद्दत गर्छ भने भिटामिन ‘सी’ले त्वचा र रक्त धमनिमा चो’ट लाग्न’बाट बचाउँछ । यस्तै जिंक र आइर’नजस्ता मिनरलले चोटलाई छिट्टै नि’को पार्न मद्दत गर्छन् ।
तपाईं क्या’न्सरपी’डित हो र नियमित कि’मो’थेरापी गर्नुहुन्छ भने पनि शरीरमा नि’लो दाग देखिन्छ । यस्तो यसकारण हुन्छ कि कि’मोथे’रापी गर्दा ब्लड प्लेट्स’हरु धेरै तल आउने गर्छन् । ब्लड प्लेट्सहरु तल आउँदा शरीरमा निलो दाग देखिने गर्छ ।
केही औषधि र स’प्लिमेन्ट्स प्रयोग गर्दा पनि शरीरमा नि’लो दा’ग देखिन सक्छ । वार्फ’रिन र ए’स्प्रिन जस्ता रग’तलाई पा’तलो बनाउने औषधि सेवन गर्दा शरीरमा नि’लो दाग देखिन्छ । यस्तै माछाको तेल, लसुन जस्ता केही प्राकृतिक सप्लिमेन्ट्सहरु अधिक सेवन गर्दा पनि शरीरमा नि’लो दाग देखिन्छ ।
वंशा’णुगत रो’ग हिमो’फिलियाका कारणले पनि शरीरमा नि’लो दा’ग देखिन्छ । यो रो’गका कारण शरीरको बाहिरी भागमा रगत जम्ने समस्या हुन्छ ।
यो रो’ग रगतमा थ्राम्बो’प्लास्टिन नामक पदार्थको कमि’का कारण हुन्छ ।
बढ्दो उमेर र बुढ्यौलीका कारणले पनि तपाईंको शरीरमा निलो दा’ग देखिन्छ । बढ्दो उमेरसँगै रग’तका धमिनिहरु कमजोर हुने भएकाले ब’ढ्यौलीका कारण शरी’रमा निलो दाग देखिन्छ ।
थ्रम्बो’फिलिया रगत जाम हुने एक प्रकारको समस्या हो । यसले रक्त प्रवाहमा असर पुर्याउने गर्छ । यसलाई ब्लिडिङ डिसअर्डर पनि भनिन्छ, जसका कारण ब्ल’ड प्ले’ट्सहरु धेरै कम हुन्छ । ब्लड प्लेट कम हुँदा शरीरमा निलो दाग देखिन्छ ।
वोन विलिब्रान्ड रो’ग एक यस्तो अवस्था हो, जसमा अत्य’धिक र विस्तारित मात्रामा रक्तश्राव हुने गर्छ । यो रोग वो’न वि’लिब्रान्ड नामक प्रोटिनको स्त’रमा रग’तको कमिका कारण लाग्ने गर्छ । यो स’मस्याबाट पी’डित व्यक्तिको शरी’रमा सा’मान्य चो’ट ला’ग्दा पनि शरीरमा ठूला नि’लडाम देखिने गर्छ । एजेन्सीको सहयोगमा ।यो खबर केटिएम खबर बाट साभार गरियको हो ।
Prevमोटोपनले सतायो ? एकदमै सजिलो सँग यसरी घटाउनु होस् तौल
nextमुख, ओठ र जिब्रोमा खटिरा आयो ? यस्ता छन् एकदमै सजिला घरेलु उपाय